CBL-Mariner, kugoverwa kweMicrosoft kweLinux kunosvika vhezheni 1.0 | Kubva kuLinux
CBL-Mariner, kugoverwa kweMicrosoft Linux kunosvika vhezheni 1.0
Darkcrizt | 12/07/2021 15:04 | Yakagadziridzwa ku 12/07/2021 22:06 | Kugoverwa
Microsoft ichangobva kuzivisa kuvhurwa kwe iyo nyowani vhezheni yekuparadzira kwako Linux "CBL-Mariner 1.0" (Yakajairika Base Linux Mariner), iyo inozivikanwa senge yekutanga yakagadzika vhezheni yeprojekti uye inoshandiswa mumapurojekiti ako emukati eLinux, akadai seWindows Subsystem yeLinux (WSL) uye neAzure Sphere inoshanda sisitimu.
Kune avo vasingazivikanwe neCBL-Mariner, iwe unofanirwa kuziva kuti uku ndiko kugoverwa kwemukati kweLinux kwezvivakwa zvegore uye zvigadzirwa zveMicrosoft nemasevhisi. CBL-Mariner yakagadzirirwa kupa chikuva inoenderana nepuratifomu yezvinhu izvi uye masevhisi uye inowedzera kugona kweMicrosoft kuenderana neLinux inogadziridza.
Kugovera kwacho kunoshamisa, sezvo pInopa yakajairwa diki seti yemapakeji ekutanga anoita seyakajairika hwaro hwekugadzira mudziyo uzadze, inomiririra nharaunda nemasevhisi anomhanyisa pane zvigadzirwa zvegore uye zvishandiso zvemupendero. Mimwe mhinduro dzakaomarara uye dzakasarudzika dzinogona kugadzirwa nekuwedzera mamwe mapakeji pamusoro peCBL-Mariner, asi hwaro hwese eaya masisitimu anoramba asina kuchinjika, zvichirerutsa kugadzirisa uye kugadzirira kusimudzira.
Semuenzaniso, CBL-Mariner inoshandiswa sehwaro hweWSL, iyo inopa magirafu emagetsi ekuronga kuvhurwa kweLinux GUI kunyorera muWSL2 subsystem (Windows Subsystem yeLinux) nharaunda. Hwaro hwekugovera uku hausati hwachinja uye mashandiro akaitwa anoitwa nekuwedzera mapakeji neWeston composite server, XWayland, PulseAudio, uye FreeRDP.
Iyo CBL-Mariner inovaka system pInotendera kuburitsa yakaparadzana RPM mapakeji akavakirwa maSpEC mafaera uye sosi kodhi, uye monolithic system mifananidzo inogadzirwa uchishandisa iyo rpm-ostree toolkit uye neatomically yakagadziridzwa pasina kupaza kuita akapatsanurwa mapakeji. Nekudaro, maviri mamodheru ekuvandudza kuendesa anotsigirwa: nekuvandudza yega mapakeji uye nekuvakazve uye kugadzirisa iyo yese system mufananidzo. Kugovaniswa kunosanganisira chete zvinonyanya kukosha zvikamu uye zvakagadzirirwa kushoma ndangariro uye diski nzvimbo yekushandisa.pamwe nekumhanya kwakanyanya kumhanya. Kugovera kwacho kunooneswa zvakare nekubatanidzwa kwenzvimbo dzinoverengeka dzekuwedzera kuchengetedza.
Iyo purojekiti inotora nzira ye "zvakanyanya kuchengetedzeka nekutadza", pamusoro pekupa iko kugona kusefa system kufona kuburikidza nececc mashini, diski kupatsanura kunyorera, kurongedza kwepaketi kuburikidza siginicha yedhijitari Iyo stack yekufashukira, buffer kufashukira, uye mutsara fomati yekudzivirira modhi inogoneswa nekusarudzika panguva yekuvaka chikamu.
Kero nzvimbo randomization modes inotsigirwa mukernel yakagoneswa yeLinux, pamwe nenzira dzekudzivirira pakurwiswa zvine hukama nematanho ekufananidzira, nepo enzvimbo dzekurangarira umo zvikamu zvine kernel uye module data zviripo, iyo yekuverenga-chete maitiro akaiswa uye kuitiswa kwakarambidzwa Kodhi. Nesarudzo, kugona kurambidza kurodha kweiyo kernel module mushure mekutanga system kunowanikwa.
Mifananidzo yakadzika yeIO haina kupihwa. Mushandisi anofanirwa kunge achikwanisa kugadzira chifananidzo neakafanira padding iye (yekumisikidza mirairo inopihwa Ubuntu 18.04). Iyo yekuchengetera yakavakirwa RPMs inowanikwa iyo iwe yaunogona kushandisa kugadzira yako wega mifananidzo zvichibva pane iyo yekumisikidza faira.
Mutungamiri we systemd inoshandiswa kubata masevhisi uye bootstrapping uye iyo RPM uye DNF inobata package (vmWare musiyano TDNF) inopihwa manejimendi manejimendi, nepo SSH server isingabvumidzwe nekutadza.
Kuisa kugovera, mugadziri anopiwa uyo anogona kushanda mune ese ari maviri mavara uye graphical modhi. Iyo yekumisikidza inopa kugona kuisa neiyo yakazara kana yekutanga seti yemapakeji, inopa interface kusarudza diski partition, sarudza zita remubati, uye gadzira vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » CBL-Mariner, kugoverwa kweMicrosoft Linux kunosvika vhezheni 1.0
Sophos Yakawana Linux Kurwisa Kudzivirirwa Kutanga Capsule8
Photocall TV, inonakidza sarudzo yekutarisa DTT chero kupi